အားလုံးမထင်မှတ်တဲ့ ပေါင်၁၈သန်းတန် ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့်နဲ့ စဖွင့်နိုင်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အစီအစဉ် - Myanmar Globe
16/12/2021 Admin Knowledge 0
အားလုံးမထင်မှတ်တဲ့ ပေါင်၁၈သန်းတန် ပြင်သစ်လက်ရွေးစင် ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့်နဲ့ စဖွင့်နိုင်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အစီအစဉ်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့်ကို ပေါင် 18 သန်းနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတာကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့အစီအစဉ်တွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအသင်းရဲ့ ဘယ်ခံစစ်မှုး Luke Shaw ရဲ့ပုံစံကောင်းပျောက်ဆုံးနေမှုကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ဘယ်နောက်ခံလူတစ်ဦးကို အံ့အားသင့်ဖွယ် ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း သတင်းတွေထွက်လာတာပါ။
Ralf Rangnick ဟာ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာ ပထမဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း အသင်းမှာ အခြေကျလာပြီဖြစ်တာကြောင့် လာမယ့်ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွက် ပစ်မှတ်စာရင်းကို ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီစာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ကွင်းလယ်ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအစီအစဉ်ဟာ အဲဗာတန် ဘယ်နောက်ခံလူ Lucas Digneကို ခေါ်ယူဖို့ အခွင့်အရေးရလာတဲ့နဲ့အတူ ပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်ကစားသမား Lucas Digneသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နွေရာသီတွင် ဘာစီလိုနာမှ အဲဗာတန်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Digne သည် ယခုရာသီတွင် အဲဗာတန်အတွက် အထင်ရှားဆုံး ခြေစွမ်းအပြနိုင်ဆုံးကစားသမား‌ တော့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ၄င်းသည် နည်းပြသစ် Rafael Benitez လက်ထက်တွင် ပုံစံကောင်းရရန် ရုန်းကန်နေရပြီး သွင်းဂိုးမရှိ ဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ကြိမ်မှ ပြုလုပ်ထားနိုင်ခြင်း မရှိပေ။
လီဗာပူးနဲ့ ချဲလ်ဆီးနည်းပြဟောင်း Rafael Benitezဟာ ဂူဒီဆင်ပါ့ခ်ကို ရောက်ရှိလာကတည်းက အဲဗာတန်ကို ပိုကျစ်လျစ်တဲ့အသင်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နည်း‌ဗျူဟာအရ ခံစစ်ကို ပိုမိုကျစ်လစ်စေဖို့ တောင်ပံနောက်ခံလူများဖြစ်သည့် Digne နှင့် ညာခြမ်းအသင်းဖော် Seamus Coleman တို့ကို တိုက်စစ်လိုက်ပါဖို့ကို ကန့်သတ်ထားသည်။ Digneအနေနှင့် အဲဗာတန်၏ ခံစစ်ချဉ်းကပ်မှုတွင် စိတ်ပျက်နေပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိခြင်းကြောင့် နည်းပြRafael Benitezနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာလည်း အဖုအထစ် ဖြစ်လာနေသည်။
သို့သော် အဲဗာတန်နည်းပြ Rafael Benitezသည် သူနှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ ဝေဖန်ခဲ့သည့် အသက် 28 နှစ်အရွယ် Digne အား နောက်ဆုံးလိဂ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲတွင် လူစာရင်းမှ ချန်လှပ်ခဲ့သည်။ Digne သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည့် အဲဗာတန်အသင်း ပွဲထွက်လူစာရင်းတွင် ပြန်လည်ပါဝင်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော်လည်း Benitez က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွန်းလွဲပိုင်း ၎င်း၏သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Digne သည် နေမကောင်းကြောင်းပြောဆိုကာ ဖျားနာနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“မနေ့က ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီး သူ(Digne) ကစားသမား ၁၁ယောက်စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သူနေမကောင်းဖြစ်ပြီး မကစားနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။”
အကြောင်းအရာများကို ထောက်ရှုသော် Digneအနေနှင့် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်အတွင်း Benitez ထံမှ ရရှိခဲ့သော စိမ်းကားမှုအတွက် နေမကောင်း၍ မကစားနိုင်ကြောင်းပြောကာ ပုန်ကန်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Benitez ဆက်လက်တာဝန်ယူနေသရွေ့ Digne သည် အဲဗာတန်မှ ထွက်ခွာရန် စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၊ ဘင်နီတက်ဇ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့အား ထိပ်တိုက်တွေ့ ဝေဖန်သည် ကစားသမားများကို ထုတ်ပယ်သည့်အခါတွင် အလျှော့မပေးကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီး – စပိန်သားသည် ယခုနွေရာသီရောက်ပြီးမကြာမီတွင် ဂျိမ်းစ်ရိုဒရီဂွက်ဇ်ကို အသင်းမှာ ရောင်းထုတ်ရာတွင် အချိန်မဖြုန်း နောက်မတွန့်ခဲ့ပေ။ အခြေအနေများအရ Digneကို လာမယ့်ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများနေသည်။
Luke Shaw ဟာ 2014 ခုနှစ်ရောက်ကတည်းက United ရဲ့ ပထမဦးစားပေး ဘယ်နောက်ခံလူ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့ အနေအထားက မတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ယူရိုမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးက မျှော်လင့်ချက်ကြီးခဲ့သော်လည်း တဲလက်စ်ခြေစွမ်းပြလာခြင်နဲ့အတူ ပထမနေရာအတွက် အပြင်းအထန် မေးခွန်းထုတ် ခံနေရပါတယ်။
Luke Shawနေရာကို အစားထိုးဖို့ Digneဟာ ထိုက်တန်ပါရဲ့လား…? တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်..
ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အဲဗာတန်နည်းပြ အန်ဆယ်လော့တီလက်ထက် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားရတဲ့ အချိန်မှာ Digneဟာ ခြေစွမ်းအမြင့်ဆုံး အနေအထားမှာရှိခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဂိုးဖန်တီးမှု ၇ ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ မနှစ်က ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူတွေထဲမှာ Expected Assists အများဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး key pass အများဆုံးပေးပို့နိုင်တဲ့ နေရာမှ နံပါတ် ၅နေရာက ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Digneရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံက ဘောလုံးနှင့်အတူ တိုက်စစ်အားသန်တဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူပါ။ ဒါ‌ပေမယ့် နည်းပြ Benitez ကတော့ တိုက်စစ်လိုက်ပါဖို့ ကန့်သတ်ထားပြီး သူ့ကို ခံစစ်ကိုပိုမိုအားပြုကစားစေချင်တာပါ။
ယူနိုက်တက်အနေနှင့် ဂူဒီဆင်ပါ့ခ်ကနေ ဒီပြင်သစ်သားကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အလားအလားကောင်းနေသော်လည်း အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူပြီးပါက သုံးငွေလောက် မလောက်အပေါ် မူတည်နေသည်။ Digneကို ခေါ်ယူနိုင်ပါက လုခ်ရှောနဲ့ အဲလက်စ်တဲလက်စ် တို့နှစ်ယောက်လုံးကို သေချာပေါက်ပွဲထွက်ခွင့် အတွက်ဖိအားပေးနိုင်မည်ဟု ယူနိုက်တက်ဘက်က ယုံကြည်နေသည်။
အားလုံးမထငျမှတျတဲ့ ပေါငျ၁၈သနျးတနျ ပွငျသဈလကျရှေးစငျ ပရီးမီးယားလိဂျကွယျပှငျ့နဲ့ စဖှငျ့နိုငျတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အပွောငျးအရှအေ့စီအစဉျ
မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျကွယျပှငျ့ကို ပေါငျ 18 သနျးနဲ့ ချေါယူဖို့ အစီအစဉျဆှဲနတောကွောငျ့ အပွောငျးအရှအေ့စီအစဉျတှေ ပွောငျးလဲသှားနိုငျပါတယျ။ လကျရှိအသငျးရဲ့ ဘယျခံစဈမှုး Luke Shaw ရဲ့ပုံစံကောငျးပြောကျဆုံးနမှေုကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျဘယျနောကျခံလူတဈဦးကို အံ့အားသငျ့ဖှယျ ချေါယူဖို့ ကွိုးစားနကွေောငျး သတငျးတှထှေကျလာတာပါ။
Ralf Rangnick ဟာ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျမှာ ပထမဆုံးရကျသတ်တပတျအနညျးငယျအတှငျး အသငျးမှာ အခွကေလြာပွီဖွဈတာကွောငျ့ လာမယျ့ဇနျနဝါရီအပွောငျးအရှကေ့ာလအတှကျ ပဈမှတျစာရငျးကို ရေးဆှဲထားပွီးဖွဈဖှယျရှိပါတယျ။ အဲဒီစာရငျးမှာ ထိပျဆုံးက ကှငျးလယျကစားသမားသဈ ချေျါယူဖို့ ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီအစီအစဉျဟာ အဲဗာတနျ ဘယျနောကျခံလူ Lucas Digneကို ချေါယူဖို့ အခှငျ့အရေးရလာတဲ့နဲ့အတူ ပွောငျးလဲသှားနိုငျဖှယျရှိနပေါတယျ။
ပွငျသဈလကျရှေးစငျကစားသမား Lucas Digneသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နှရောသီတှငျ ဘာစီလိုနာမှ အဲဗာတနျသို့ ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး လှနျခဲ့သညျ့ ၃ နှဈတာကာလအတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျ၏ ထငျရှားကြျောကွားသော ကစားသမားတဈဦးဖွဈခဲ့သညျ။ Digne သညျ ယခုရာသီတှငျ အဲဗာတနျအတှကျ အထငျရှားဆုံး ခွစှေမျးအပွနိုငျဆုံးကစားသမား‌ တော့ မဟုတျခဲ့ပေ။ ၄ငျးသညျ နညျးပွသဈ Rafael Benitez လကျထကျတှငျ ပုံစံကောငျးရရနျ ရုနျးကနျနရေပွီး သှငျးဂိုးမရှိ ဂိုးဖနျတီးမှုတဈကွိမျမှ ပွုလုပျထားနိုငျခွငျး မရှိပေ။
လီဗာပူးနဲ့ ခြဲလျဆီးနညျးပွဟောငျး Rafael Benitezဟာ ဂူဒီဆငျပါ့ချကို ရောကျရှိလာကတညျးက အဲဗာတနျကို ပိုကဈြလဈြတဲ့အသငျးဖွဈအောငျ ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့နညျး‌ဗြူဟာအရ ခံစဈကို ပိုမိုကဈြလဈစဖေို့ တောငျပံနောကျခံလူမြားဖွဈသညျ့ Digne နှငျ့ ညာခွမျးအသငျးဖျော Seamus Coleman တို့ကို တိုကျစဈလိုကျပါဖို့ကို ကနျ့သတျထားသညျ။ Digneအနနှေငျ့ အဲဗာတနျ၏ ခံစဈခဉျြးကပျမှုတှငျ စိတျပကျြနပွေီး ၎င်းငျး၏ကိုယျပိုငျစှမျးဆောငျရညျအပျေါ သကျရောကျမှုရှိခွငျးကွောငျ့ နညျးပွRafael Benitezနဲ့ ဆကျဆံရေးမှာလညျး အဖုအထဈ ဖွဈလာနသေညျ။
သို့သျော အဲဗာတနျနညျးပွ Rafael Benitezသညျ သူနှငျ့ထိပျတိုကျတှေ့ ဝဖေနျခဲ့သညျ့ အသကျ 28 နှဈအရှယျ Digne အား နောကျဆုံးလိဂျပှဲစဉျနှဈပှဲတှငျ လူစာရငျးမှ ခနျြလှပျခဲ့သညျ။ Digne သညျ ကွာသပတေးနတှေ့ငျ ခယျြလျဆီးအသငျးနှငျ့ ယှဉျပွိုငျကစားမညျ့ အဲဗာတနျအသငျး ပှဲထှကျလူစာရငျးတှငျ ပွနျလညျပါဝငျလာမညျဟု မြှျောလငျ့ထားသျောလညျး Benitez က ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့နျးလှဲပိုငျး ၎င်းငျး၏သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ Digne သညျ နမေကောငျးကွောငျးပွောဆိုကာ ဖြားနာနပွေီဖွဈကွောငျး ပွောဆိုခဲ့သညျ။
“မနကေ့ ကြှနျတျောတို့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဉျတဈခုလုပျခဲ့ပွီး သူ(Digne) ကစားသမား ၁၁ယောကျစာရငျးမှာ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ သူနမေကောငျးဖွဈပွီး မကစားနိုငျဘူးလို့ ပွောပါတယျ။”
အကွောငျးအရာမြားကို ထောကျရှုသျော Digneအနနှေငျ့ လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပတျအတှငျး Benitez ထံမှ ရရှိခဲ့သော စိမျးကားမှုအတှကျ နမေကောငျး၍ မကစားနိုငျကွောငျးပွောကာ ပုနျကနျလိုကျခွငျးပငျဖွဈသညျ။ Benitez ဆကျလကျတာဝနျယူနသေရှေ့ Digne သညျ အဲဗာတနျမှ ထှကျခှာရနျ စိတျအားထကျသနျနလေိမျ့မညျ။
ထို့အပွငျ၊ ဘငျနီတကျဇျကိုယျတိုငျကလညျး သူ့အား ထိပျတိုကျတှေ့ ဝဖေနျသညျ ကစားသမားမြားကို ထုတျပယျသညျ့အခါတှငျ အလြှော့မပေးကွောငျး သကျသပွေခဲ့ပွီး – စပိနျသားသညျ ယခုနှရောသီရောကျပွီးမကွာမီတှငျ ဂြိမျးဈရိုဒရီဂှကျဇျကို အသငျးမှာ ရောငျးထုတျရာတှငျ အခြိနျမဖွုနျး နောကျမတှနျ့ခဲ့ပေ။ အခွအေနမြေားအရ Digneကို လာမယျ့ဇနျနဝါရီ အပွောငျးအရှမှေ့ာ စြေးသကျသကျသာသာနဲ့ ချေါယူနိုငျဖို့ အခှငျ့အလမျးမြားနသေညျ။
Luke Shaw ဟာ 2014 ခုနှဈရောကျကတညျးက United ရဲ့ ပထမဦးစားပေး ဘယျနောကျခံလူ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဒီရာသီမှာ သူ့ရဲ့ အနအေထားက မတညျငွိမျတဲ့ပုံစံတှနေဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ ယူရိုမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျခဲ့လို့ ပရိတျသတျတှအေားလုံးက မြှျောလငျ့ခကျြကွီးခဲ့သျောလညျး တဲလကျဈခွစှေမျးပွလာခွငျနဲ့အတူ ပထမနရောအတှကျ အပွငျးအထနျ မေးခှနျးထုတျ ခံနရေပါတယျ။
Luke Shawနရောကို အစားထိုးဖို့ Digneဟာ ထိုကျတနျပါရဲ့လား…? တဈခကျြကွညျ့ရအောငျ..
ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အဲဗာတနျနညျးပွ အနျဆယျလော့တီလကျထကျ လှတျလှတျလပျလပျကစားရတဲ့ အခြိနျမှာ Digneဟာ ခွစှေမျးအမွငျ့ဆုံး အနအေထားမှာရှိခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဂိုးဖနျတီးမှု ၇ ကွိမျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ မနှဈက ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ ဘယျနောကျခံလူတှထေဲမှာ Expected Assists အမြားဆုံးလုပျနိုငျခဲ့ပွီး key pass အမြားဆုံးပေးပို့နိုငျတဲ့ နရောမှ နံပါတျ ၅နရောက ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ Digneရဲ့ အကောငျးဆုံးပုံစံက ဘောလုံးနှငျ့အတူ တိုကျစဈအားသနျတဲ့ ဘယျနောကျခံလူပါ။ ဒါ‌ပမေယျ့ နညျးပွ Benitez ကတော့ တိုကျစဈလိုကျပါဖို့ ကနျ့သတျထားပွီး သူ့ကို ခံစဈကိုပိုမိုအားပွုကစားစခေငျြတာပါ။
ယူနိုကျတကျအနနှေငျ့ ဂူဒီဆငျပါ့ချကနေ ဒီပွငျသဈသားကို ချေါယူနိုငျဖို့ အလားအလားကောငျးနသေျောလညျး အဓိကလိုအပျနတေဲ့ ကှငျးလယျကစားသမားကိုချေါယူပွီးပါက သုံးငှလေောကျ မလောကျအပျေါ မူတညျနသေညျ။ Digneကို ချေါယူနိုငျပါက လုချရှောနဲ့ အဲလကျဈတဲလကျဈ တို့နှဈယောကျလုံးကို သခြောပေါကျပှဲထှကျခှငျ့ အတှကျဖိအားပေးနိုငျမညျဟု ယူနိုကျတကျဘကျက ယုံကွညျနသေညျ။